Semalt: Mampidi-doza ny Cyber ​​izay tsy fantatrareo
Ny vokatra azo avy amin'ny fiarovana nentim-paharazana amin'ny ankapobeny dia miady amin'ny loza mitatao fantatra. Rehefa miaiky izy ireo fa mety hampidi-doza ho an'ny tranonkala iray, dia mandray fepetra henjana izy ireo. Ireo Cyber-mpanao heloka bevava dia mahafantatra io zava-misy io ary manandrana hampiasa vola bebe kokoa mba hampivelarana fandaharan'asa vaovao izay manatanteraka ny fanafihana tsy fantatra amin'ny alalan'ireo rafitra ireo. Oliver King, ny Semalt Mpanantanteraka Success Manager, dia mamaritra ny ambany ambanin'ny habaka cyber izay mieli-patrana indrindra izay tokony handoavana ny sainao.
Tsy dia lafo loatra ny fandrahonana hozakaina satria ireo mpanao heloka bevava dia mamerina indray ny code efa antitra nampiasaina hanafika fikambanana. Manararaotra ny zava-misy izy ireo fa tsy ampy fahatsiarovana ny vokatra fiarovana. Ireo manam-pahaizana momba ny fiarovana dia voatery hanatsara ny lahatahiry misy ankehitriny ary tsy hiraharaha ireo karazana tranga tranainy. Noho izany, raha mampiasa ireo rindrambaiko taloha ireo mpanao heloka bevava cyber, misy ny fiovana goavana mety hitranga amin'ny fanafihana. Koa satria ny protocole fiarovana dia tsy mahafantatra ny fisiany ao amin'ny lisitra, dia lasa loza mitatao tsy fantatra izany.
Ny mpitahiry fahatsiarovan-tsainan'ny mpampiasa dia fomba tsara indrindra hiarovana ny fikambanana voaro amin'ny fanafihana toy izany. Misy ao amin'ny fotodrafitrasa fitahirizana rahona izay ahafahana manangona tahiry be dia be..Ny fepetra fiarovana toy izany dia afaka mampitaha ny loza mety hitranga amin'izao fotoana izao amin'ny zavatra ananany amin'ny mpitandrina fahatsiarovana ary manakana izany raha ilaina.
Koditra efa nisy teo aloha
Ireo mpandika lalàna dia manova ny endriky ny fandrahonana fantany mba hametrahana fandrahonana vaovao sy tsy fantatry ny rehetra amin'ny alalan'ny famoahana azy ireo amin'ny fomba ofisialy na avy hatrany. Ny vokatra vaovao dia mitohy misosa rehefa mandalo amin'ny tambajotra samihafa. Ny antony mahatonga azy ireo tsy hijery dia ny fiarovana ny protocol ihany no miankina amin'ny fari-peo tokana mba hamaritana raha misy endrika iray ny endrika heloka bevava cyber. Ny sasany amin'izy ireo dia mampiasa teknolojia haingana izay mampiasa andiana lahatsoratra maromaro ao amin'ny code mba hamantarana ny loza. Raha miova ny toetra iray, dia lasa tanteraka tanteraka izany.
Ny fikambanana dia afaka miaro tena amin'ny fanafihana toy izany amin'ny fampiasana sonia polymorphika. Mampiseho ireo fandrahonana azo atao izy ireo amin'ny fahatakarana ny votoaty voarakitra ao anatin'ny fandaharam-pianarana ary amin'ny fandalinana ny lozam-pifamoivoizana avy any amin'ny faritra
vao haingana niteraka fandrahonana
Mety maniry ny hamorona fanafihana amin'ny aterineto vaovao amin'ny alalan'ny fanoratana ny fehezan-dalàna avy amin'ny scratch ny Cyber-jiolahy. Na izany aza, mitaky vola be amin'izany izy io. Ny fandaminana dia mety tsy maintsy mandinika ny fitondrantenany sy ny orinasan'ny orinasa, satria ny fomba tsara indrindra azo ampiasaina amin'ny cybersecurity dia azo hatsaraina noho io fahalalana io.
Ny fomba tsara indrindra hisorohana ny fanafihana toy izany dia ny fametrahana fiarovana maimaim-poana. Jereo ny fanao tsara indrindra amin'ny fikambanana mba hahaizany olana toy izany. Ataovy azo antoka ny mandefa ny rakitra tsy fantany rehetra sy ny dom-bola mampiahiahy. Izany rehetra izany dia tokony atao haingana mba hanamaivanana ny fahavoazana na ny fandrosoan'ny tambajotram-pandraharahana Source .